ခန္ဓာကိုယ် ပုံသဏ္ဍာန်များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြောဆိုခြင်း - Myanmar Network
ခန္ဓာကိုယ် ပုံသဏ္ဍာန်များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ပြောဆိုခြင်း
Posted by Language Republic on October 1, 2015 at 11:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်များကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများဖြင့် ပြည့်နှက် နေပါသည်။ တချို့က အကောင်းသဘောဆောင်ပြီး တချို့ကတော့ အကောင်းသဘောသိပ်မဆောင်ကြပါ။ ခန္ဓာကိုယ် ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးများသော စကားလုံးအချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
အဆီနည်းသော သူတစ်ယောက်အကြောင်းပြောရာတွင် အသုံးများသော စကားလုံးမှာ thin (ပိန်သော) ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းစကားလုံးကို ယေဘုယျအားဖြင့် အပျက်သဘောဆောင်သည့် အဓိပ္ပာယ်ဖြင့် အသုံးပြုကြပါသည်။
She's very pretty but she's too thin. (သူမက တကယ်လှပေမဲ့ ပိန်လွန်းတယ်။)
အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် တူညီတဲ့ skinny (ပိန်ကပ်ကပ်ဖြစ်သော)ကတော့ အနည်းငယ် အရပ်သုံး (informal) ဆန်ပါတယ်။
I don't like his looks – he's too skinny. (သူ့ရဲ့ပုံပန်းကို မကြိုက်ဘူး ပိန်ကပ်ကပ်နိုင်လွန်းအားကြီးတယ်။)
Skinny ထက်တောင်မှ ပိုပိန်တာကတော့ (နည်းနည်းအရပ်သုံးဆန်သော) scrawny (အရိုးပေါ်အရေတင်သော) ဖြစ်ပါသည်။ Scrawny ဖြစ်သော သူသည် ပိန်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက် အရိုးတွေက ငေါထွက်နေပါသည်။
He wasascrawny little kid. (သူက ငယ်ငယ်က အရိုးပေါ် အရေတင်လောက်အောင် ပိန်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။)
Gaunt (ချောင်ကျနေသော)ကတော့ အရမ်းကို ချောင်ကျနေသော မျက်နှာတွေအကြောင်းပြောရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ နေမကောင်းသော သူ တစ်ယောက်၏ မျက်နှာက ချောင်ကျနေသော ပုံစံမျိုးကို ပြောခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Her face was gaunt and grey. (သူမ မျက်နှာက ချောင်ကျပြီး ဖြူဖပ်ဖြူရော်နဲ့။)
Emaciated (ပိန်ချုံးချည့်နဲ့နေသော) ဟူသော နာမ၀ိသေသနကတော့ အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်အောင် ပိန်လွန်းသူများအကြောင်း ပြောရာ၌ အသုံးပြုပါသည်။ အများအားဖြင့်သော မကျန်းမာသောကြောင့် (သို့) အစာရေစာငတ်မွတ်သောကြောင့် ဖြစ်သော ပိန်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။
Some of the patients were emaciated (တချို့သော လူနာများက ပိန်ချုံးချည့်နဲ့နေတာပဲ။)
အထက်၌ ဖော်ပြခဲ့သော နာမ၀ိသေသနများသည် အပျက်သဘောကို ဆောင်ကြပါသည်။ သို့သော် လူတွေ ပိန်တာကို အကောင်းသဘောဆောင်သည့်ဘက်ကနေပြီး ဖော်ပြသော နာမ၀ိသေသနတွေကလည်း ၄င်းတို့လောက်နီးနီး များပြား ပါသည်။
၄င်းတို့အထဲမှာ အများဆုံးအသုံးပြုသော စကားလုံးမှာ slim (သွယ်လျသော) ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စုံ တစ်ယောက်သည် slim ဖြစ်တယ်ဆိုပါက ထိုသူပိန်တာက ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။
Charlotte was looking lovely and slim in the photos. (ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ ရှားလော့(တ)က လှပပြီး သွယ်သွယ်လျလျလေးဖြစ်နေတယ်။)
Slim နဲ့ အဓိပ္ပာယ်တူတဲ့ တခြားစကားလုံးများကတော့ "အဆီနည်းခြင်း" ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ထက် အဓိပ္ပာယ်ပိုပါ သည်။ ဥပမာ slender (သေးသွယ်ပါးလျသော) ဟူသော စကားလုံးတွင် သွယ်လျခြင်း အဓိပ္ပာယ်အပြင် ကြော့မော့ခြင်း အဓိပ္ပာယ်ကိုပါ ဆောင်ပါသည်။
She was small and slender likeadancer. (သူမက ကချေသည်တစ်ယောက်လိုပဲ သေးသေးသွယ်သွယ်နဲ့ ကြော့မော့နေတာပဲ။)
Lean (ကျစ်လျစ်၍ သန်မာသော) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ကျစ်ကျစ် လျစ်လျစ်နှင့် သန်သန်မာမာရှိသော ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အသုံးပြုသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။
Long distance runners are usually fairly lean. (တာဝေးအပြေးသမားတွေက အများအားဖြင့် အတော်အသင့် ကျစ်လျစ်ပြီး သန်မာကြတယ်။)
အကောင်းသဘောဆောင် petite (သေးသွယ်ကျစ်လျစ်လှပသော)၏ အဓိပ္ပာယ်မှာ အရပ်ပုပြီး သွယ်လျသော ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနာမ၀ိသေသနကို အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းမပျိုးလေးများအတွက်သာ အသုံးပြုပါသည်။ အကောင်းသဘောရော၊ အပျက်သဘောကိုပါ မဆောင်သော slight (ပါးလျသော)ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ ပိန်ပိန်ပါးပါးနှင့် သိမ်မွေ့သောဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။
အမှန်တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖော်ပြသော စကားလုံးများသည်လည်း အထက်ပါ စကားလုံးများလောက်ပင်များပြားပါသည်။ Fat (၀သော) သည် အသားအများကြီးရှိသောသူအကြောင်း ပြောရာတွင် အသုံးများသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းသည် တဲ့တိုးကျလွန်းအားကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းငယ် ၀သော သူအကြောင်းပြောတဲ့အခါ အပျက်သဘော သိပ်မဆောင်သော တခြားစကားလုံးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် stocky (ဂင်တိုတို) ၄င်း၏ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ သန်မာပြီး ကိုယ်လုံးကျယ်သော ဖြစ်ပါသည်။
He's got the stocky build ofarugby player. (သူခန္ဓာကိုယ်က rugby ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်လိုပဲ ဂင်တိုတိုနဲ့)။
Solid ကိုလည်း ဤအဓိပ္ပာယ်ဖြင့် မကြာမကြာ အသုံးပြုပါသည်။
Asachild, James was always quite solid (ကလေး အရွယ်တုန်းက James က အမြဲပဲ တော်တော်လေး တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ရှိခဲ့တယ်။)
ထို့အတူပင် fat အစားတဲ့ တိုးသိပ်မဆန်သော big ကို တစ်ခါတစ်ရံ အသုံးပြုပါသည်။
Sophie didn't use to be so big, did she? (ဆိုဖီက အရင်က ဒီလောက် မ၀ပါဘူး၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား?)
Plump (ပြည့်ဖြိုးသော)နှင့် chubby (၀၀ကစ်ကစ်) တို့ကတော့ အနည်းငယ်ဝသောဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ သို့သော် ထိုစကားလုံး (၂)လုံးစလုံးသည် ကြားရတာ နှစ်လိုဖွယ်ရာရှိပြီး ကလေးငယ်များအတွက် အသုံးပြုပါသည်။
She was admiring the baby's plump little legs. / Look at his chubby cheeks! (သူမက ကလေးလေးရဲ့ ခြေထောက်၀၀လေးတွေကို သဘောကျနေခဲ့တာ။ / သူရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေကို ကြည့်စမ်းပါ။)
တစ်ချို့သော fat (၀သော) စကားလုံးတွေက တဲ့တိုးဆန်လွန်းပါသည်။ Overweight (အ၀လွန်သော) စကားလုံးသည် ဆရာဝန်တစ်ဦးက ၀သော လူနာတစ်ယောက်အကြောင်းပြောရာ၌ အသုံးပြုသော စကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ လေသံက တော့ နည်းနည်းဆေးပညာဆန်ပါသည်။ မတရားအ၀လွန်သော လူနာကိုတော့ ဆရာဝန်အနေဖြင့် obese လို့ အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပါသည်။
So many ways to be fat and thin! (၀ဖို့ ပိန်ဖို့နည်းလမ်းတွေမှာ အများကြီးပါပဲ။)
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ရဲ့ Body shapes ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အင်ျဂလိပျဘာသာစကားတှငျ ကြှနျုပျတို့၏ ခန်ဓာကိုယျမြား၏ ပုံသဏ်ဍာနျမြားကို ဖျောပွသော စကားလုံးမြားဖွငျ့ ပွညျ့နှကျ နပေါသညျ။ တခြို့က အကောငျးသဘောဆောငျပွီး တခြို့ကတော့ အကောငျးသဘောသိပျမဆောငျကွပါ။ ခန်ဓာကိုယျ ပုံသဏ်ဍာနျမြားနှငျ့ပတျသကျ၍ အသုံးမြားသော စကားလုံးအခြို့ကို လလေ့ာကွညျ့ကွပါစို့။
အဆီနညျးသော သူတဈယောကျအကွောငျးပွောရာတှငျ အသုံးမြားသော စကားလုံးမှာ thin (ပိနျသော) ဖွဈပါသညျ။ ၎င်းငျးစကားလုံးကို ယဘေုယအြားဖွငျ့ အပကျြသဘောဆောငျသညျ့ အဓိပ်ပာယျဖွငျ့ အသုံးပွုကွပါသညျ။
She's very pretty but she's too thin. (သူမက တကယျလှပမေဲ့ ပိနျလှနျးတယျ။)
အဓိပ်ပာယျအားဖွငျ့ တူညီတဲ့ skinny (ပိနျကပျကပျဖွဈသော)ကတော့ အနညျးငယျ အရပျသုံး (informal) ဆနျပါတယျ။
I don't like his looks – he's too skinny. (သူ့ရဲ့ပုံပနျးကို မကွိုကျဘူး ပိနျကပျကပျနိုငျလှနျးအားကွီးတယျ။)
Skinny ထကျတောငျမှ ပိုပိနျတာကတော့ (နညျးနညျးအရပျသုံးဆနျသော) scrawny (အရိုးပျေါအရတေငျသော) ဖွဈပါသညျ။ Scrawny ဖွဈသော သူသညျ ပိနျလှနျအားကွီးတဲ့အတှကျ အရိုးတှကေ ငေါထှကျနပေါသညျ။
He wasascrawny little kid. (သူက ငယျငယျက အရိုးပျေါ အရတေငျလောကျအောငျ ပိနျတဲ့ ကလေးတဈယောကျဖွဈခဲ့တယျ။)
Gaunt (ခြောငျကနြသေော)ကတော့ အရမျးကို ခြောငျကနြသေော မကျြနှာတှအေကွောငျးပွောရာတှငျ အသုံးပွုပါသညျ။ နမေကောငျးသော သူ တဈယောကျ၏ မကျြနှာက ခြောငျကနြသေော ပုံစံမြိုးကို ပွောခွငျး ဖွဈပါသညျ။
Her face was gaunt and grey. (သူမ မကျြနှာက ခြောငျကပြွီး ဖွူဖပျဖွူရျောနဲ့။)
Emaciated (ပိနျခြုံးခညျြ့နဲ့နသေော) ဟူသော နာမဝိသသေနကတော့ အန်တရာယျဖွဈလောကျအောငျ ပိနျလှနျးသူမြားအကွောငျး ပွောရာ၌ အသုံးပွုပါသညျ။ အမြားအားဖွငျ့သော မကနျြးမာသောကွောငျ့ (သို့) အစာရစောငတျမှတျသောကွောငျ့ ဖွဈသော ပိနျခွငျးမြိုးဖွဈပါသညျ။
Some of the patients were emaciated (တခြို့သော လူနာမြားက ပိနျခြုံးခညျြ့နဲ့နတောပဲ။)
အထကျ၌ ဖျောပွခဲ့သော နာမဝိသသေနမြားသညျ အပကျြသဘောကို ဆောငျကွပါသညျ။ သို့သျော လူတှေ ပိနျတာကို အကောငျးသဘောဆောငျသညျ့ဘကျကနပွေီး ဖျောပွသော နာမဝိသသေနတှကေလညျး ၎င်းငျးတို့လောကျနီးနီး မြားပွား ပါသညျ။
၎င်းငျးတို့အထဲမှာ အမြားဆုံးအသုံးပွုသော စကားလုံးမှာ slim (သှယျလသြော) ဖွဈပါသညျ။ တဈစုံ တဈယောကျသညျ slim ဖွဈတယျဆိုပါက ထိုသူပိနျတာက ဆှဲဆောငျမှုရှိသညျဟု အဓိပ်ပာယျရပါသညျ။
Charlotte was looking lovely and slim in the photos. (ဓာတျပုံတှထေဲမှာ ရှားလော့(တ)က လှပပွီး သှယျသှယျလလြလြေးဖွဈနတေယျ။)
Slim နဲ့ အဓိပ်ပာယျတူတဲ့ တခွားစကားလုံးမြားကတော့ "အဆီနညျးခွငျး" ဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျထကျ အဓိပ်ပာယျပိုပါ သညျ။ ဥပမာ slender (သေးသှယျပါးလသြော) ဟူသော စကားလုံးတှငျ သှယျလခြွငျး အဓိပ်ပာယျအပွငျ ကွော့မော့ခွငျး အဓိပ်ပာယျကိုပါ ဆောငျပါသညျ။
She was small and slender likeadancer. (သူမက ကခသြေညျတဈယောကျလိုပဲ သေးသေးသှယျသှယျနဲ့ ကွော့မော့နတောပဲ။)
Lean (ကဈြလဈြ၍ သနျမာသော) ဆိုတဲ့ စကားလုံးကတော့ ကဈြကဈြ လဈြလဈြနှငျ့ သနျသနျမာမာရှိသော ခန်ဓာကိုယျအတှကျ အသုံးပွုသော စကားလုံးဖွဈပါသညျ။
Long distance runners are usually fairly lean. (တာဝေးအပွေးသမားတှကေ အမြားအားဖွငျ့ အတျောအသငျ့ ကဈြလဈြပွီး သနျမာကွတယျ။)
အကောငျးသဘောဆောငျ petite (သေးသှယျကဈြလဈြလှပသော)၏ အဓိပ်ပာယျမှာ အရပျပုပွီး သှယျလသြော ပငျဖွဈပါသညျ။ ထိုနာမဝိသသေနကို အမြိုးသမီးမြားနှငျ့ မိနျးမပြိုးလေးမြားအတှကျသာ အသုံးပွုပါသညျ။ အကောငျးသဘောရော၊ အပကျြသဘောကိုပါ မဆောငျသော slight (ပါးလသြော)ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ ပိနျပိနျပါးပါးနှငျ့ သိမျမှသေ့ောဟု အဓိပ်ပာယျရပါသညျ။
အမှနျတကယျတော့ ခန်ဓာကိုယျ၏ ဆနျ့ကငျြဘကျပုံသဏ်ဍာနျကို ဖျောပွသော စကားလုံးမြားသညျလညျး အထကျပါ စကားလုံးမြားလောကျပငျမြားပွားပါသညျ။ Fat (ဝသော) သညျ အသားအမြားကွီးရှိသောသူအကွောငျး ပွောရာတှငျ အသုံးမြားသော စကားလုံးဖွဈပါသညျ။ သို့သျော ၎င်းငျးသညျ တဲ့တိုးကလြှနျးအားကွီးပါသညျ။ ကြှနျုပျတို့သညျ အနညျးငယျ ဝသော သူအကွောငျးပွောတဲ့အခါ အပကျြသဘော သိပျမဆောငျသော တခွားစကားလုံးမြားကို အသုံးပွုပါသညျ။ ဥပမာအားဖွငျ့ stocky (ဂငျတိုတို) ၎င်းငျး၏ အဓိပ်ပာယျကတော့ သနျမာပွီး ကိုယျလုံးကယျြသော ဖွဈပါသညျ။
He's got the stocky build ofarugby player. (သူခန်ဓာကိုယျက rugby ဘောလုံးကစားသမားတဈယောကျလိုပဲ ဂငျတိုတိုနဲ့)။
Solid ကိုလညျး ဤအဓိပ်ပာယျဖွငျ့ မကွာမကွာ အသုံးပွုပါသညျ။
Asachild, James was always quite solid (ကလေး အရှယျတုနျးက James က အမွဲပဲ တျောတျောလေး တုတျတုတျခိုငျခိုငျရှိခဲ့တယျ။)
ထို့အတူပငျ fat အစားတဲ့ တိုးသိပျမဆနျသော big ကို တဈခါတဈရံ အသုံးပွုပါသညျ။
Sophie didn't use to be so big, did she? (ဆိုဖီက အရငျက ဒီလောကျ မဝပါဘူး၊ ဟုတျတယျမဟုတျလား?)
Plump (ပွညျ့ဖွိုးသော)နှငျ့ chubby (၀၀ကဈကဈ) တို့ကတော့ အနညျးငယျဝသောဟု အဓိပ်ပာယျရပါသညျ။ သို့သျော ထိုစကားလုံး (၂)လုံးစလုံးသညျ ကွားရတာ နှဈလိုဖှယျရာရှိပွီး ကလေးငယျမြားအတှကျ အသုံးပွုပါသညျ။
She was admiring the baby's plump little legs. / Look at his chubby cheeks! (သူမက ကလေးလေးရဲ့ ခွထေောကျ၀၀လေးတှကေို သဘောကနြခေဲ့တာ။ / သူရဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ ပါးဖောငျးဖောငျးလေးတှကေို ကွညျ့စမျးပါ။)
တဈခြို့သော fat (ဝသော) စကားလုံးတှကေ တဲ့တိုးဆနျလှနျးပါသညျ။ Overweight (အဝလှနျသော) စကားလုံးသညျ ဆရာဝနျတဈဦးက ဝသော လူနာတဈယောကျအကွောငျးပွောရာ၌ အသုံးပွုသော စကားလုံးဖွဈပါသညျ။ လသေံက တော့ နညျးနညျးဆေးပညာဆနျပါသညျ။ မတရားအဝလှနျသော လူနာကိုတော့ ဆရာဝနျအနဖွေငျ့ obese လို့ အသုံးပွုမှာ ဖွဈပါသညျ။
So many ways to be fat and thin! (ဝဖို့ ပိနျဖို့နညျးလမျးတှမှော အမြားကွီးပါပဲ။)
Dictionaryblog.cambridge.org မှ Kate Woodford ရဲ့ Body shapes ကို ကိုးကားဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈပါတယျ။
Permalink Reply by Kyaw Zin Oo on October 1, 2015 at 11:56
Permalink Reply by zaw naing on October 1, 2015 at 17:25
it's useful for me . thank.
Permalink Reply by Maymi Zin on October 2, 2015 at 8:23
It's very useful…thanks
Permalink Reply by Thiri Mon on October 2, 2015 at 11:31
Permalink Reply by Khank Htoon Khaing on October 2, 2015 at 12:09
Permalink Reply by seng nan on October 2, 2015 at 12:25
Permalink Reply by Zaw Htay Aung on October 2, 2015 at 13:12
I like it .Thank you so much.
Permalink Reply by Phoe Pyae on October 2, 2015 at 15:22
I like beautiful slim girl. He looksaleam man.
Permalink Reply by Ma Wint Wint Lin on October 2, 2015 at 15:43
Permalink Reply by ye thu aung on October 2, 2015 at 17:11
Permalink Reply by Ma Mahello on October 3, 2015 at 12:16
Permalink Reply by zar nie hlaing on October 3, 2015 at 15:32